‘प्रेम गीत भन्दा म यस्तो गीत गाउँछु माथि’ : सुदर्शन थापा, तर कसरी ? « Ramailo छ
‘प्रेम गीत भन्दा म यस्तो गीत गाउँछु माथि’ : सुदर्शन थापा, तर कसरी ?
समय : 9:22 pm
निर्देशक सुदर्शन थापाले आफ्नो अघिल्लो फिल्म ‘प्रेम गीत’ भन्दा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ माथि रहेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार आयोजित प्रेस मिटमा सुदर्शनले यस्तो बताएका हुन् । आखिर कसरी भयो त ‘प्रेम गीत’ भन्दा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ माथि ?
फिल्मको ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा निर्देशक थापाले भने ‘प्रेम गीत माघ २९ गते रिलिज भएको थियो । म यस्तो गीत गाउँछु असार ३० गते रिलिज हुँदैछ । त्यसैले प्रेम गीत भन्दा म यस्तो गीत गाउँछु माथि छ ।’ सुदर्शनको यस प्रकारको जवाफले प्रेसमिटमा हाँसो छाएको थियो । साँच्चै फिल्म चाहिं कस्तो बनेको होला त ? असार ३० सम्म प्रतिक्षा गरौं । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ मा पल शाह र पूजा शर्माको मुख्य भूमिका रहेको छ ।